Horjooge ka tirsanaa Argagixisada Al-Shabaab oo isa soo dhiibay – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Horjooge ka tirsanaa Argagixisada Al-Shabaab oo isa soo dhiibay
By Naciimo shiino / February 17, 2020 February 17, 2020
Xudur(SONNA)-Ciidamada Xoogga dalka ee ka howlgala gobolka Bakool ayaa Horjooge Sare oo ka tirsanaa maleeshiyayada Argagixisada ah ee Al-Shabaab ku soo bandhigay degmada Xudur ee xarunta Gobolkaasi.
Horjoogahaan oo lagu magcaabo Colaad Cabdiraxmaan Maxamed Xerow,ayaa Kooxda Nabadiidka ah ee Al-shabaab ka tirsanaa 11 sano, Guddoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee magaalada Xudur Ibraahim Isaaq Ibarahim ayaa sheegay in ninkaan uu markii hore xiriir la soo sameeyay kadibna uu isu soo dhiibay ciidamada Xoogga dalka.
Guddoomiye ku xigeenka ayaa uga mahadceliyay ciidamada Xoogga dalka dadaalada ay ugu jiraan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayeen haradiga kooxda Al--shabab ee dhumaaleysiga ku jira.
Colaad Cabdiraxmaan Maxamed xerow ayaa tilmaamay inuu kooxda arxanka daran ee Al-Shabaab ugu shaqeyn jiray Darawalnimo, islamarkaana uu isaga soo baxay fikirkooda, kadib markii uu adkeysan waayay waxyaabaha ay sameynayaan oo aan raadka ku laheen shareecada Islaamka.
Howlgalada iyo wacyigelinta ay Ciidamada Xoogga Dalka ka sameeyen gobalada dalka ayaa waxaa ay keentay in ay isi soo dhiibaan maleeshiyaadka horay uga tirsanaa Al-shabaab gaar ahaan Horjoogayaasha, kuwaasi oo ka soo laabanaya Fikirka Xagjirka ah ee kooxda ku dhibaateyso shacabka.
Ciidamada Xoogga Dalka ayaa howlagaladii ugu dambeeyay ee ay ka sameeyeen gobalada Bay iyo Bakool waxaa ay kula wareegeen deegaanno dhowr ah oo ay maleeshiyadku ku sugnaayeen.
Wasiiro dhagax dhigay mashruuca horumarinta Muqdisho Istaadiyuum
Puntland oo war kasoo saartay sugidda amniga iyo ka hortagga Cudurka Coronavirus
Coronavirus oo kar-kaarada jebsanaya, dad hor leh oo u dhimanaya ama qaadaya daqiiqadiiba!
Gobolka Banaadir oo amray in la xiro goobaha ganacsi ee ku yaalla Xeebta Liido
Wasiirka Warfaafinta XFS oo cambaareeyay qarixii kooxaha argagixisada ah ay ka geysteenGaroowe
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo kormeeray goobaha biya mareenka ah ee caasimadda